Ukuba ufanele ulondoloze ulusu olomileyo, ngoko lubukeka luhle kakhulu. Kodwa ngokukhawuleza xa uphula umlinganiselo omnye wokunyamekela, unokuqiniseka ukuba unikwa imibimbi engaphambi kwexesha. Kwaye ukuba oku kungenzeki, sincoma ukuba ufunde ngokucophelela iziphakamiso ezinikezelwe kweli nqaku "Nakekela ulusu olomileyo ebusweni."
Ukubonakala kwamakhankethi kwenzeka ngenxa yokuba ulusu, elungele ukoma, lunokukhuselwa okungakumbi kunamanye aluhlaza. Iingqungquthela ezinobuncwane zivelisa amaninzi amaninzi, kwaye ngenxa yoko, akukho nto ikhupha ikhutshana elikhuselekileyo elukhumbeni. Ngokweminyaka yobudala, ibonakala ngakumbi nangaphezulu, kuba sele sele ivele emva kweminyaka engama-20 kukho ukuhla kwexabiso lemveliso, kwaye emva kwesikhumba se-30 kuyimfuneko yononophelo olulodwa.
Izindlela zokucoca isikhumba esomileyo ebusweni
Musa ukuhlamba ikhumba lakho ngamanzi atshisayo okanye abandayo, njengamanzi abandayo kunceda ukunciphisa imithana yegazi, kunye namanzi ashushu - ngokuchaseneyo, ukwandisa, ngoko ke imibimbi ingabonakala kwangaphambili.
Ukuze ulusu lube nolunzulu kwiimpembelelo zangaphandle, lufanele lugcine amaninzi amaninzi okwenyama. Ukwenza oku, musa ukuyihlamba yonke inqubo yokusa.
Ukuhlamba ngexesha lasebusika kulungile ukusebenzisa amanzi kwindawo yeqondo lokushisa, kwaye ehlobo ukuhlamba ngamanzi apholileyo. Ngaphambi kokuba uhlambe, kucetyiswa ukuba ucoce kancinci isikhumba kunye ne-oyile yemifuno okanye ukhilimu omuncu. Isikhumba siya kuba lula ukudlulisa inkqubo yokuhlamba, ukuba ngaphambi kokucocwa ngemveliso yobisi olunomso. Kule njongo, kuya kubakho ngexesha le-kefir, i-yogurt, i-acidophilus, ngenxa yokuba izinto ezikuzo zizondla kwaye zinciphisa isikhumba, kwaye zikhuthaza ukulungelelaniswa kwe-acid-base balance. Unokucoca ulusu kunye nekhilimu okanye i-krimu imizuzu engama-15 phambi kokuhlamba.
Ngaphambi kokuba uthathe nayiphi na inkqubo yamanzi, ingaba uhlamba elwandle, uhlamba okanye uhlamba, uhlamba echibini, kufuneka ulungiselele ukhuseleko lwesikhumba. Ngenxa yale njongo, sebenzisa ukhilimu okhethekileyo, okanye ucoce isikhumba ngekhilimu omuncu, ibhotela (ayifanelekanga) okanye ioli yezolimo. Ngesikhumba esomileyo, ii-facials ezahlukileyo zincedo kakhulu, kwaye emva kwenkqubo, kufuneka usebenzise ukhilimu onamavithamini.
Ebusuku, ulusu, elungele ukoma, luye luhlambuluke ngekhempi ekhethekileyo, kungekhona amanzi, ungaphinda ukwehliswa kwamacube, okanye i-kefir, kwaye emva kokuhlambulula kusetyenziswa ukhilimu wobusuku.
Ngendlela yokunyamekela kwesikhumba esomileyo ebusweni kufuneka ibe yinqanaba lesonka. I-remedy ayifanele isuse amanqabileyo engokwemvelo kwesikhumba, kufuneka ibe yi-cream cream, okanye ubisi olukhethekileyo, ngokuqinisekileyo kunye ne-moisturizers. I-krimu yosuku kufuneka ikhethwe ngefayile ye-UV, ukukhusela isikhumba kwimisebe ye-ultraviolet, ekhokelela ekugugeni kwasekuqaleni.
Ukusetyenziswa kwesephu kwimigaqo yamanzi, nokuba kuhlamba okanye ukuhlamba, kufuneka kuthintelwe. Kunokwenzeka ukuba uhlambe kwaye uhlambe isikhumba somzimba usebenzisa i-oat flakes. Kule nkqubo, kufuneka bathululelwe kwisikhwama selinen kwaye asetyenziswe endaweni yokuhlamba. Izinto eziwusizo ezizele i-oatmeal, ukondla ulusu, kwaye ungazihlambululi ngolo hlobo olufanelekileyo lweoli.
Ukuze uhlambulule ulusu, sebenzisa i-lotions ezithambileyo. Ngenxa yale njongo, iipalal of rose red zifanelekile. Kumele uthele iikomityi ezintathu zeepalesi nge-almond okanye i-peach oil, ukwenzela ukuba iipalali zigqutywe ngokupheleleyo ngeoli, uze ubeke yonke into ekuhlambekeni kwe-steam uze ubambe de kube i-rose petals ibe ngumbala. Le lotion kufuneka isuswe ubuso amaxesha amathathu ngosuku.
I-Toning ibakala elibalulekileyo ekunyamekeleni kwesikhumba esomileyo ekhaya. Abanye besetyhini bakholelwa ukuba ukusebenzisa i-tonic akuyona into eyimfuneko, kodwa oku akunjalo ngokupheleleyo. Ngoncedo lwe-tonic, ulusu lulungiselelwe ezinye iimveliso zonyango, kwaye ukuphumelela kwezi mveliso kuphuculwe.
Ukonkqisa isikhumba kuphucula i-microcirculation kwi-capillaries kuyo, nokuba yincinci kakhulu, evumela igazi ukuba litshelelwe kuwo, kwaye ngoko ke iimveliso zokunakekelwa kwesikhumba ezisetyenzisiweyo zithathwa ngumntu wesithathu olungcono. Ngokusekelwe kulo, sinokugqiba ukuba sichitha ezinye iindishi ezibizayo kunye nee-gel okanye naziphi na ezinye izimonyo. Ukuba usebenzisa izimonyo zomgca omnye, ziya kuzalisana ngokupheleleyo.
Kwi-tonic kwesikhumba esomileyo, akufuneki kubekho utywala, kodwa kufuneka kuphuculwe kunye nezithako ezinokuphucula kunye nezolonwabo.
Ukuze uvelise isikhumba, ungasebenzisa amanzi ase-rose okanye i-glycerin lotion, ekubeni inesiphumo sokunciphisa nokucoca. Ukukhupha isikhumba, ukuxuba ngejusi ye-nettle kulungile.
I-toning iya kuba bhetele xa ukubunjwa kwetoni kuya kubandakanya iiprotheni zesilika okanye ingqolowa, i-collagen yolwandle, i-kroksi, i-algae kunye namavithamini.
Izindlela zokuphucula isikhumba esomileyo ebusweni
Ukukhupha isikhumba esomileyo kuyinkqubo enyanzelekileyo emva kokuhlanjululwa nokucoca. Xa ukhetha, khokelwa ngama-creams kunye nama-lotions, afakwe kakuhle kwaye ngokukhawuleza akwazi ukudala umqobo wokukhusela. Faka isicelo sikhonkco esiphuculisayo ngokucoca, kwaye emva kwemizuzu engama-20, ukhilimu kufuneka ususwe ngendwangu elithambileyo.
Ikhumba elomileyo lidinga ukutshiza okufudumayo kwi-ukhilimu. Ukuxilisa kuyenziwa ngokusebenzisa i-teaspoon evuthayo. I-spoon kufuneka ifuthe emanzini atshisayo, nangona kunjalo ngokumodareyitha, uze udibanise ubuso obunokukhwabanisa ngaphambili, indawo ye-décolleté kunye nentamo, ukuphatha umhlaba ngokunyakaza kwama-massage.
Ukondla kwesikhumba esomileyo
Ngelixa ulondla isikhumba esomileyo, khumbula ukuba kufuna inkqubo ekhethekileyo. Ngaphambi kokuba usebenzise ukhilimu onondla, ulusu kufuneka lufudumale. Oku kunokwenziwa ngeenkomfa ezenziwe ngeentyantyambo kunye nemifuno. Enye yeendlela zokupheka: uthatha i-minti, i-lime, i-chamomile, i-sage 2 tbsp, uthele izithako 0.5 ilitha lamanzi abilayo, mawube u-brew imizuzu engama-15, ngoko-ke, udibanise i-gauze kwi-infusion, ngaphambili ulandelwe, kwaye ubeke ubuso nentamo. Xa ulusu lufudumala ngokwaneleyo, ungasebenzisa ukhilimu onondla.
Xa ukhetha ukhilimu we-day ukunyamekela ulusu olomileyo, qwa lasele ukuhambisana kwalo. Ukuba ubona ukuba ukhilimu ubonakala njengobisi, ngoko kuyaqinisekileyo ukuba iqulethe i-fat enough, ngoko jonga ukhilimu oluninzi. Ukuba ubonile ukuba ukhilimu uqulethe i-gamma-linoleic acid, i-cream ekwimeko enjalo igcina umswakama elukhumbeni.
Emva kokuba ufake isicelo sekhefu, linda imizuzu embalwa, uze usebenze kwakhona kwiindawo ezingenakuneliswa.
Kufuneka ukuba usebenzise ukhilimu okhuselayo kunoma yiphina imozulu, kwaye emva koko kubalulekile ukusebenzisa izimonyo zokuzicoca.
Ukuba kufuneka uhlale ixesha elide kwisitrato, ebusika kubanda nakwimoya, kufuneka ufunde indlela yokusebenzisa izilwanyana zamalungu ukukhusela ubuso bakho kwizinto zangaphandle. Ngenxa yale njongo, i-goose fat okanye i-lard yangaphakathi iyanceda. Unyibiliki kakuhle amanqatha, kwaye ukuze ugcine kakuhle, yongeza i-benzoic acid kwisilinganiso se-2 g nganye kwi-100 g yeoli. Ngaphambi kokuba uphume ixesha elide ebusika, sebenzisa uluhlu oluncinci lwamafutha kunobuso bakho. Gcina amanqatha esiqandisini.
Kufuneka uqaphele nokushisa ilanga, kukulungele ukushona ilanga ekuseni, njengokuba ngaphantsi kwelanga elide ulusu lunesikhumba sokugaya kunye nokomisa ngakumbi.
Masks ekhaya kwikhumba elomileyo
Xa ukhathalela isikhumba esomileyo ebusweni kufuneka usebenzise iimaski zemvelo ezinika ulusu ngamavithamini, kwaye zondla kwaye zondla. Kwiindlela zokupheka kweemaski, kubalulekile ukuba ube nemvelo yemvelo yesilwanyana okanye imvelaphi yemifuno, umzekelo, ioli yemifino, ukhilimu, ukhilimu omuncu.
I-mask, apho kukho i-extract ye-chamomile kunye ne-yolk, inondla, iyanciphisa kwaye inciphisa ukuvuvukala kwesikhumba. Iqanda le-Egg kufanele litshiswe ngeoli yezityalo (1 tsp) kunye nomxube ophumela, ukuhla kwehliswa, ukukhupha i-chamomile (1 tsp). Le maski kufuneka isetyenziswe ebusweni ngoluhlu oluncinci kwaye lugcinwe imizuzu eyi-15. Ukuhlamba i-mask ilandela itiye kwindawo yeqondo lokushisa, igqithiswe kancane. Emva kwenkqubo, sebenzisa ebusweni bakho ukhilimu owuthandayo owuthandayo.
I-Mask evela kwiklabishi emhlophe yindlela engabizi kwaye iyasebenza. Okokuqala, sulela ulusu ngeoli okanye ioli ye-corn, uze wenze icompress eshushu ngokusebenzisa isisombululo soda esibuthathaka kwisilinganiso se-1 tsp. i-soda nge 1 litre yamanzi. I-cabbage gruel entsha elungiselelwe ebusweni bakho, kwaye emva kwemizuzu eyi-10-15 ihlanza amanzi apholileyo kwaye usebenzise ukhilimu onondla.
Unokudibanisa i-apula encinci ne-1 ithispoon. ukhilimu omuncu, sebenzisa entanyeni kunye nobuso malunga nemizuzu engama-20 uze uhlambe ngamanzi afudumele.
I-mask ye-Strawberry ne-ukhilimu yenziwe ngale ndlela: xuba ama-strawberries nge-1 tbsp. ukhilimu, gcoba kakuhle kwaye usetyenzise kwesikhumba sentamo kunye nobuso. Lindela kude kube yimaski encomekile, bese usebenzisa enye ingqimba, kwaye wenze okufanayo kunye nohlu lwesithathu. Lindela kude kube yinto yonke idle kwaye ihlanjululwe ngamanzi apholileyo.
Ikhumba elomileyo liya kunceda ukuba linganyangeki kwaye lomelele kwi-stimuli yangaphandle yemaski ezivela kwizityalo eziye zenza iipropati zokuhlaziya.
Umaski olula wesikhumba esomileyo unokwenziwa ngokusebenzisa ijusi le-alo, ngenxa yokuba esi sityalo sikhona phantse yonke imizi. Uhlobo lobusi (2 tbsp.) Hlanganisa ne-1 tbsp. i-juice ye-aloe, kwaye usebenzise ebusweni imizuzu eyi-15. Iimaski ezinjalo zikhuthaza ukuphuculwa kwebala, njengoko zivuselela i-metabolism, zinceda ukubunjwa kweeseli ezintsha, ukuphucula ukuhamba kwegazi.
Njenge-tonic, i-decoction ye-Manchurian aralia ifanelekile, icinezela, i-lotions kunye ne-lotions zenziwe kulo myalelo.
Kananjalo kwesikhumba esomileyo, unokwenza imaski kwi-grapefruit, ijusi ye-carrot, ukhilimu omuncu kunye nomgubo welayisi, rhoqo, ii-2 ngeveki, ngenyanga. Umxube ulungiselelwe ngolu hlobo lulandelayo: kufuneka udibanise i-pulp yesigqabi esinye (1 tsp) ngekhilimu omuncu, faka i-tablespoon 1 kuyo. umgubo welayisi kunye ne-1 tsp. ijusikiti. Hlanganisa zonke izithako ngokufanelekileyo, sisebenzise kwindawo yecolleté, intamo kunye nobuso imizuzu engama-30. Emva koko uhlambe umkhenkce wecala lokubilisa ngamanzi uze ugcobe ulusu ngejisi yamagilebhisi. Ukuhlamba le jusi akuyimfuneko.
Ungasebenzisa kwakhona iimaski zeevenkile, kodwa ungakulibali malunga neendlela zokupheka, kuba unokuzipheka ekhaya nasiphi na ixesha. Into eyona nto kukuba umphumo kufuneka ube-unempilo kunye nekhanda elihle.
Iziphumo emva kokwenza ngokusisigxina
Masks ngobuso ngeoli edibeneyo
Imaski yasekhaya yesikhumba esomileyo ebusweni
Isobho seTurkey kunye neembotyi
Ukuhluthwa kweShayina yisisombululo kwiingxaki ezininzi zempilo
Ukutya kwiqela legazi: iimveliso ezicetyiswayo kubantu abahlukeneyo
IHoroscope yenhlanhla yiveki kaNovemba 13-19, 2017
Cholecystitis ngexesha lokukhulelwa
Iimfashini zeMfashini zeModeli 2014
Izidlo zonke iintsuku - zokupheka zokupheka
Unokuhlamba njani izitya zokutshiswa?